Insert: Codeless Mobile App Kubatanidzwa Zvimiro | Martech Zone
Insert yakagadzirirwa kuti nhare dzekushandisa nharembozha zviitwe nevashambadziri pasina kudiwa kwekuvandudzwa kwemapurogiramu enhare. Iyo chikuva ine huwandu hwakawanda hwezvinhu zvekuita izvo zvinogona kuiswa zviri nyore, kuvandudzwa, uye kutarisirwa. Rondedzero yezvinhu zvakavakirwa vatengesi uye zvikwata zvezvigadzirwa kuti zviwiriridze rwendo rwevashandisi, zvinokonzeresa chero nguva, kuwedzera kubatanidzwa, uye kuyera uye kuongorora mashandiro eapp. Iwo maapplication anowanikwa kune iOS uye Android.
Iwo maficha akaputswa kuita munzvimbo sere dzinoshanda, kusanganisira Giraidhi, Kutaurirana, Gadziridza, Shandura, Shingairira, Tora, Nzwisisa uye Invent. Izvi zvinotevera idzo tsananguro kubva ku Pinza Chigadzirwa Chigadzirwa.
Guide inoisa inokubatsira iwe kubudirira mubhodhi vashandisi vatsva uye kuburitsa zviripo kune mamwe maficha uye kugona.
App Kufamba - Gadziridza ruzivo rwevashandisi vako kekutanga-nguva Ita shuwa kuti vanonzwisisa kukosha kweapps nekuratidzira izvo zvakakosha zveapps vachishandisa carousel inoonekwa kana mushandisi atanga kuvhura iyo app.
Simbisa App Area - Nongedzera vashandisi kutarisisa kune yakasarudzika nzvimbo yeapps neku "kujekesa" nzvimbo ino nerugwaro runotsanangura. Yakakura yekubhodhi, kana kutyaira kushandiswa kwezvinhu zvitsva.
Mobile Tooltip - Ipa mbozhanhare yekushandisa inotsanangura bhatani kana chimiro, ine zvinyorwa zvinonongedzera kune icho chakatarwa app chinhu, chimiro kana kufona-ku-chiito.
Taura App Feature - Muchirevo chakakodzera, taura kuvashandisi ivo vanoshandisa chaiyo app chinhu uye voenda navo chaiko kune inoenderana app skrini, uchishandisa yakadzika chinongedzo.
Communications inoisa inogadzira nhaurwa dzakanangwa nevashandisi nekutumira iwo meseji panguva yakakodzera, inokonzereswa nekushandisa chaiko kweapp, nenhoroondo yemushandisi kana chaiyo-nguva app chiitiko uye nezvimwe, uye zvinogona kunongedzerwa kuwedzera kusangana kwemushandisi neshoko.
In-app meseji - In-app mameseji anozivisa mushandisi, uye anogona kuperekedzwa neiyo link kana yakadzika, kutyaira nekukurumidza chiito. Meseji dzinowanzo sanganisira chifananidzo uye yekufona-ku-kuita bhatani iyo inogona kuendesa mushandisi kune yakasarudzika app skrini.
Kupindirana - Interstitials yakazara-skrini inodzvanya mifananidzo inoiswa pakati pezvikwiriso, mushure meimwe skrini uye pamberi peinotevera.
Vhidhiyo meseji - Vashandisi vanofarira vhidhiyo, uye mameseji evhidhiyo inzira huru yekutaurirana yakanyanya 'yekushushikana' kana yakaoma meseji inopfuura yakajairwa ruzivo rwekunyora.
Banner - Kusiyana neyakaganhurirwa, mabhena madiki mifananidzo inodzvanywa inogona kuoneswa munzvimbo dzakasiyana dzechiso. Nekuwedzera bhanhire repasi kuapp yako, unogona kutaurirana nevashandisi vako usingakanganise mashandisiro avo eapp, sezvo bhanari risingavatadzise kushandisa iyo app.
Tsanangurira inogonesa mabhenji kuti aite shanduko yemamiriro ezvinhu kuapp kutyaira kubatanidzwa, nekugadzirisa zvinyorwa zveapp, mifananidzo kana madingindira.
Chinja Chinyorwa - Une typo kana kuda A / B kuyedza akati wandei sarudzo dzemavara? Unoda kushandura zvinyorwa zveapp zvechiitiko chakakosha kana zororo? Unoda kuchinja zvinyorwa kana mushandisi apedza chimwe chiitiko pane iyo app? Maka mameseji aunoda kutsiva pachiratidziro cheapp, chitsiva nechinyorwa chitsva uye wakanaka kuenda.
Chinja Mufananidzo - Chinja mifananidzo yemapurogiramu kugadzirisa nyaya dzeapp kana kuona kuti ndeapi mifananidzo anotyaira kuita zviri nani. Super yakapusa isina-kukodha, kunyangwe kana shanduko yemufananidzo ichikonzerwa chete kune imwe mamiriro, vamwe vateereri kana nguva.
Chinja Musoro - Chinja iyo app kuti ipe mwaka madingindira, akadai semazororo kana kudzokera kumishumo yechikoro.
Kutendeuka kuisa kwakagadzirwa kugadzira chinangwa chekutenga uye kuona kuti chinopera mukutenga chaiko. Ivo vanogadzira chinangwa chekutenga, nepo nguva yekushandisa zviyeuchidzo zvengoro inogona kuendesa vashandisi kuti vatangezve kutenga kwakasiiwa.
kopani - Kuzivisa vangangoita vatengi nezve chii chiri kupihwa uye nei vachifanira kutenga izvozvi, unogona kuratidza inoitisa kupihwa nekoponi. Kudzvanya pazviri kunotora vashandisi kune inoenderana skrini skrini kana kuvhura browser.
Cart chiyeuchidzo (Push) - Kana vashandisi vachine zvinhu mungoro yavo, vatore kuti vadzokere uye vapedzise kutenga neakavanzika ziviso kuti zvakadzama zvinongedzo kune iyo app's ngoro skrini.
In-app Meseji - muapps meseji inoiswa inogona kushandiswa kuyeuchidza vashandisi vengoro yavo yekutengesa yakasiya nguva inotevera pavanotanga chirongwa.
Kubva Peji - nyore gadzira mapeji ekumisikidza mukati meapp yavo, vachivimbisa kuti vatengi vanosvika kubva kune zvakasarudzika push ziviso, kushambadzira, zvemagariro midhiya kana maemail kumapeji akasarudzika ekumisikidza ayo akagadzirirwa kutendeuka kwakawanda.
Kupindirana - Interstitials yakazara-skrini inodzvanya mifananidzo inoiswa pakati pezvikwiriso, mushure meimwe skrini uye pamberi peinotevera. Ivo vanonongedza vashandisi kune yeApple skrini kana peji rewebhu uye zvinowanzo shandiswa kuratidza nguva-inonzwisisika ruzivo senge kutengeswa kwanhasi, kusimudzira nezvimwe
Batanidzwa - Target inoisa uye inotangisa ivo, kunyangwe iine yakaoma workflows.
Dzorerazve vashandisi vasina kugona - Re-shandisa vashandisi vasina kushandisa nekushandisa yakasarudzika nguva yekupa, yakanangwa mameseji uye nezvimwe. Tsanangura uye chikamu chevashandisi vasina kugona uye tarisa zvipo zvakasiyana zvechikamu chimwe nechimwe.
Gamuchirai Vagari Vasingashandisi - Tsanangura kuti vashandisi vako vemasimba ndiani, zvichibva pamashandisirwo emashandisirwo avo uye nezvimwe, uye ratidza kuonga kwako nezvipo zvakakosha, zvidzikiso, kuwanikwa kana kukwidziridzwa.
Shanduro yekuvandudza - Gadzira in-app ziviso meseji inozivisa vashandisi nezvekuwanikwa kweiyo nyowani app vhezheni, ichibatanidza nayo.
Tora - Kuwana kuiswa kunoisa mushandisi webasa rekushandisa kuburikidza zvirinani ratings dzeapp kana kusimudzira kwepurogiramu. Chikamu ichi chinoda kuti muridzi weapp aedze nguva yakakodzera, kuitira kuti vashandisi vagamuchire zvigadzirwa zvekutora izvo zvisingatadzise mashandisiro avo eapp.
Semuenzaniso Kuwana Kuisa - Shandisa iyi yekuisa kukurudzira vashandisi kuti vagovane iyo app kana zvirimo mune zvemagariro media.
Kukurudzira muchinjikwa - Yambuka-kusimudzira mamwe maapplication, nekuvakurudzira kune vashandisi veapp.
Ronga app - Bvunza vashandisi veyero yeapp panguva yakakodzera - pavanenge vaine ruzivo rwakanaka rwekufambisa - uye pasina kuvakanganisa. Tinokurudzira kusarudza vashandisi veapp vako, nekuti ivo vanowanzo kupa chiyero chepamusoro.
Kunzwisisa - Kuwana mhinduro chaidzo kumibvunzo nezve zvinoshandiswa nemushandisi, hunhu kana mhinduro chinhu chakakosha cheiyo nharembozha yekubatanidzwa. Ichi chikamu chinosanganisira ongororo, analytics uye tsigira inoiswa.
Semuenzaniso Nzwisisa Kuisa - Batanidza nevashandisi vako kuti uwane real-time feedback pazvinhu zvitsva zveapp, kukosha kweapp, zvaunofarira, uye chero imwe nhaurwa, uchishandisa ongororo yemubvunzo mumwe chete.
Ongororo yakawanda yemibvunzo - Ongororo ine mibvunzo yakawanda inogona kuunzwa mune imwechete skrini kana neslider.
Tumira kune google analytics - Iyi yekuisa inoita kuti utarise chiitiko chaungade kuteedzera pachiratidziri, uchishandisa yedu webhu interface, uye uve nayo analytics nezve chiitiko icho chakatumirwa munguva chaiyo kuakaundi yako yeGoogle Analytics.
Gadzira inogonesa mabhurani kugadzira tsika inoisa uchishandisa chero HTML zvemukati, kuratidza chero kupi muapp yako, iine imwecheteyo matangi ekumisikidza inoisa mukati meapp mamiriro, mushandisi interface uye kunongedza vamwe vateereri.
Tags: mu-appkushambadzira mu-Appmu-app mamesejimu-app mbozhanhare mamesejiisakupindiranaMobile Anwendungnharembozha app analyticsmobile app makuponinharembozha appnharembozha app inosimbisanharembozha app interstitialnharembozha yekushambadziramobile app optimizationmobile app kutsikisanharembozha app pusha mamesejinharembozha Anopa mhinduromobile app kuongororamobile app kuyedzanharembozha app turunharembozha app kusimudzira mesejinharembozha app kufambanhare mbozha inogamuchira mamesejiMobile Appsmafoni couponsmobile interstitialmbozhanhare vhidhiyo mamesejikuongorora kwema mobile appschikuva chekuongorora chema mobile apps